Tababbarka maamulaha bulshada ama isboorti heer sare ah, Romain wuu diiday inuu doorto.
Posted by Tranquillus | Mar 29, 2021 | Shabakada
Romain waa nin dhalinyaro ah oo go'aan leh. Isboorti heer-sare ah oo shati ka haysta qaansoleyda magaalada Nice, wuxuu u qaataa in ka badan 30 saacadood usbuucii si uu u dhammaystiro hanashada edbinta, laakiin ma iloobo mustaqbalkiisa dib-u-tababar xirfadeed, oo uu u malaynayo adduunka isgaarsiinta iyo kala-guurka deegaanka. Wuxuu doortay IFOCOP Khibrad si uu ugu diyaariyo 30 usbuuc gudahood… oo uusan seegin bartilmaameedkiisa.
Maxaad u dooratay barashada fogaanta?
Waxaan ahay cayaartooy heer-sare ah, oo shati ka haysta Francs Archers de Nice Côte d'Azur. Tababarku wuxuu u baahan yahay joogitaan joogto ah sida xarunta diyaarinta. Marka waa shaqo waqti-buuxa ah. Xaaladahan oo kale, way adag tahay in la is waafajiyo xirfad isboorti iyo waxbarasho sare xitaa haddii, dabcan, waxaan si buuxda uga walaacsanahay mustaqbalkeyga xirfadeed. Tababbarka masaafada bulshada ee ay bixisay IFOCOP Khibradyadu waxay lahayd faa'iido labalaab ah: waxay ii ogolaatay inaan diirada saaro hadafyadayda isboorti anigoo isku diyaarinaya diblooma la aqoonsan yahay (RNCP - heerka liisanka) sida ugu dhakhsaha badan. Aniga ahaan, waxay ii ahayd tanaasul wanaagsan.
Waxaad dooratay tababarka Maareeyaha Bulshada.
Dhab ahaan Laakiin waxaan durbaba qorsheynayaa inaan balaadhiyo xiisahayga oo aan isbeddelo, maxaa diidaya, dhanka jago ...
Tababbarka maamulaha bulshada ama isboorti heer sare ah, Romain wuu diiday inuu doorto. July 10th, 2021Tranquillus
READ CPF - Koontada tababarka shaqsiyeed
horeTallaalka shaqaalaha: helitaanka wuxuu ku kooban yahay dadka da'doodu u dhexeyso 55 ilaa 64 jir oo ay ka mid yihiin cudurro la wadaago
socdaMaarso 8, 2021 Sidee loo hagaajiyaa abaabulka tababarka shaqaalaha? Tallaabooyinkee ayaa la door bidaa iyadoo loo eegayo baahiyaha muddada-gaaban ama muddada-dhexe ah ee la-qabsiga ama horumarinta xirfadaha gudaha? Tabobar ma ku tiirsanaanta ilaha "gudaha" ama adoo adeegsanaaya adeeg bixiyeyaal dibadda ah? Inta lagu jiro ama ...
Kusamee ganacsigaaga internetka Systèmeio
Microsoft Dynamics 365 iibka
sauvTage: barashada si loo badbaadiyo nolosha da 'kasta